Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 15/01/2021)
taa, Ogidi ndị dị na Saint-Malo dị ebube maka ịgagharị gburugburu obodo ochie, admiring the sunset, na ikiri ebili mmiri. Iji nweta ekele zuru oke nke Saint-Malo, ị kwesịrị ịnọbọ chi ma gaa agwaetiti nke Grand Be na Petit Be forts.
Ya mere, ị nọ maka ezumike ị na-agaghị echefu echefu n'akụkụ oke osimiri, na ndaghari, yachting, gba ịnyịnya n'ụsọ osimiri ọlaedo, ma saa ahụ. Maka izu ụka dị mkpirikpi ma ọ bụ ogologo, oké osimiri ga-atọ gị ụtọ na Arromanches-Les-Bains’ 550 bi, ma nwee ahụ Anwansi Normandy.
Venice bi n'oké osimiri, na ọ bụ ya mere ya kacha osimiri n'ụsọ oké osimiri na niile nke Europe. Ndị adtali na-asọpụrụ Venice, na ndị njem na-asọpụrụ ya. Ga-enwe oge ịtụnanya na-awagharị n'okporo ụzọ na warara n'okporo ụzọ.
beautifulcoastaltownitaly beautifulcoastaltownseurope CoastalTowns frenchriviera Italianriviera ejegharị